मिश्रण र mastering - यो के हो? मिश्रण र mastering लागि कार्यक्रम र हेडफोन
विभिन्न ध्वनि ईन्जिनियरहरु को सञ्चालनको धेरै अवलोकन क्षमता मिश्रण र mastering गर्न भनेर विश्वास गर्न नेतृत्व - यो मानिसहरूलाई मा पाइएको एक वास्तविक उपहार, एक सांगीतिक कान धेरै कम छ। तपाईं तस्वीर बङ्ग्याउन बिना ग्राफिक्स एक calibrated मनिटर प्रयोग काम र सही रंग प्रसारित भने, यो ध्वनि संग मामला राम्रो वक्ता आवश्यक छ। यो हाम्रो लागि मात्र सन्दर्भ बिन्दु हुनेछ। कहिलेकाहीं यो मिश्रण र mastering लागि विशेष हेडफोन मदत गर्न सक्छ, तर अझै पनि विशेषज्ञहरु वक्ता संग मुख्यतया काम।
यसको विपरीत, भिडियो निगरानी, ध्वनि काम धेरै भारी छ। यो कुरा हो ध्वनि छालहरू। तिनीहरूले तल, छत, पर्खाल र विभिन्न वस्तुहरु बाट प्रतिबिम्बित गर्छन। र प्रतिबिम्ब गुण को लहर उचाइ फरक हुनेछ। यस लेखमा हामी यस्तो जटिल रूपमा मिश्रित र एक घर रेकर्डिङ स्टुडियो को उदाहरण द्वारा महारत गतिविधि बारेमा बताउन छौँ। सुरू गरौं।
हामी अवधि एक परिभाषा सुरु। कमी - एक ध्वनि प्रक्रिया mastering, छ चरणमा शामिल अघि प्रशोधन:
हामीलाई तिनीहरूलाई द्वारा एक जाँचौं।
पहिलो, normalization प्रक्रिया ध्वनि प्रक्रियामा छ। र दोश्रो, यो संगीत को मात्रा लागि लडाई मा पहिलो चरणको छ। Normalization कार्यक्रम कूल सम्पादन गर्नुहोस् प्रो, तल छलफल गरिनेछ जसमा गर्न सकिन्छ। त्यसैले प्रभाव मेनुमा जानुहोस् र चयन आयाम-सामान्यकरणगरिएकोतस्वीर।
सङ्कुचन - यो यस्तो मिश्रण र mastering रूपमा क्षेत्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण कदम हो। त्यो अवैतनिक व्यावसायिक रेकर्डिङ देखि यो distinguishes। पर्याप्त समय दिने गतिशीलता बाहिर काम, तपाईं उच्च गुणवत्ता प्राप्त हुनेछ।
को जटिलता लागि कारण
प्रभाव सही गरेको छ भने, यो धेरै पातलो छ, तर यो रेकर्ड महसुस गरिएको छ। हुनत यो, उदाहरणका लागि, flanger रूपमा सुने गर्न सकिन्छ।
को खुम्च्याउने सबै समय काम गर्न सक्दैन। अधिकांश समय तपाईं आफ्नो सहभागिता बिना ध्वनि सुन्न। तसर्थ, खुम्च्याउने सञ्चालन रेखाचित्र र यसको स्तर लगभग बेबदल छ।
तपाईंले सबै कंप्रेशर्स नै हुन् भनेर मान्छु गर्न सक्दैन। विचार को सादगी बावजुद - जब सीमा मार्फत पारित संकेत को स्तर lowering, प्रदर्शन फरक हुन सक्छ।
सबै ध्वनि बेफाइदा चिकना हुनेछ उच्च गुणवत्ता खुम्च्याउने प्रयोग गरेर।
सङ्कुचन मूल कुराहरु
सबै भन्दा साधारण analogy - नादविद्या, Knobs घुमाई र एक आँखा संकेत स्तर मा राखन। यो आफ्नो पुस्तक जो गर्न हदसम्म, एक सम्बन्ध (अनुपात) भनिन्छ। उदाहरणका लागि,3को अनुपात: 1 संकेत 1dB गरेर सीमा नाघेको छ भनेर संकेत नाघ्यो जब3dB इन्जिनियर एक सीमा को उभार मिलाउँछ हो।
Ekvalayzing - आवृत्ति सुधार रचनाहरूको र mastering अघि सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षण को छ। फ्रिक्वेन्सी कुनै पनि समायोजन उपचार रचनाहरूको अन्य प्रभाव अघि बाहिर छ।
मिश्रण र mastering जस्ता विषयमा जो बुझ्न ती, को गायन EQ लगभग सबै को लागि एक ठूलो समस्या छ भनेर थाह छ। राम्रो ध्वनि गुणवत्ता नमूनाहरू बहाना गर्न सम्भव अझै पनि छ भने, खराब कुरा पहिले नै आवाज सही कहिल्यै सकिनँ रेकर्ड छ। को प्रशंसक वस्तुतः कुनै पनि एक महंगा स्टूडियो माइक छैन, र त्यहाँ छ भने, यो सामान्यतया गलत तरिकाले मिलान छ। व्यावसायिक रेकर्डिङ मा ठीक चयन माइक्रोफोन - आधा सफलता। दोस्रो आधा - यो सही प्रक्रिया आवाज। कारण सामाग्री गरिब गुणस्तर को सुरुमा छ भन्ने तथ्यलाई गर्न, आवाज डबल ध्यान संग उपचार गर्नुपर्छ।
घर मा ध्वनि रेकर्डिङ प्रयोग गर्दा गतिशील माइक्रोफोन सीधा ध्वनि कार्ड जोडिएको, त्यसपछि परिणामस्वरूप फाइल अनावश्यक हल्ला धेरै हुनेछ। को स्थिरता जाँच, झ्याल बन्द, टिभी बन्द: तिनीहरूलाई को केही सरल सावधानीको जोगिन मदत गर्नेछ , माइक्रोफोन अडान तथापि, हल्ला केही स्रोतहरू लिने छैन टाढा नरम जूता लगाएका, आदि ... उदाहरणका लागि, जडान बिजुली वा माइक्रोफोन को हल्ला ध्वनि कार्ड मार्फत एक रैखिक इनपुट।
प्रक्रियाहरु स्वर mastering अघि श्रोता सुन्न बीच वितरण गर्न। वा रूपमा सही र बायाँ च्यानल बीच, ध्वनि ईन्जिनियरहरु भन्छन्। यो वितरण panning भनिन्छ। आफ्नो घर स्टूडियो मा, यो बाहिर छ पैन नियन्त्रण प्रयोग गरेर। मा अंग्रेजी को कार्यक्रम को संस्करण पैन रूपमा उल्लेख छन्।
हेडफोन मा पैन सामना गर्न सजिलो तरिका, तर यो स्तम्भहरू मा समाप्त मिश्रण सुन्ने, आफ्नै कामको परिणाम जाँच गर्न आवश्यक हुनेछ।
को "स्वादिष्ट" मिश्रण प्राप्त गर्न, तपाईंले आवश्यक ध्वनि प्रभाव साथै मसला, भोजन चीनी र नुन थप्नुहोस्। (सबै कलाकार मञ्चमा जानुअघि यो लागू किनभने) यो रेकर्ड लागि बनाउन-अप जस्तै हो। ध्वनि प्रभाव संगीत जादुई सामग्री भर्न र यो उडान को भावना दिनुहोस्। तिनीहरूले प्रत्येक अन्य वा अलग दोश्रो देखि संयोजन मा प्रयोग गरिन्छ।
के mastering छ?
कहिलेकाहीं भूल रेकर्ड समयमा अप देखाउन सक्छ। यस मामला मा, संगीतकार ठट्टा गर्दै: "सोझो mastering।" को मजाक को अर्थ प्रसिद्ध अभिव्यक्ति भनेर जस्तै हो: "। सही गम्भीर Hunchback" कमी भने - मोनो र स्टेरियो ट्रयाक को एक किसिम बाट एउटा ट्रयाक सिर्जना प्रक्रिया, को गम्भीर - परिणाम प्राप्त गर्न थप काम। यो डिस्क को ठूलो उत्पादन मा रिलीज अघि अन्तिम रेकर्ड को प्रक्रिया समावेश छ।
त्यसैले, हामी यस गम्भीर निर्णय। अब यो चरणमा कति समावेश बाहिर आंकडा। त्यहाँ मात्र पाँच हो:
व्यावसायिक Sounding। अवस्थित रेकर्ड परिष्करण छुवाइहरू थप्न - यो चरण को मुख्य कार्य। यो समग्र ट्रयाक महीन विश्लेषण गर्न, स्तर पंक्तिबद्ध आवश्यक छ, र यति मा .. सामान्य, तपाईंले ध्वनि व्यावसायिक बनाउन आवश्यक छ।
सारा डिस्क को कुल अनुकूल। छैन कम ध्यान क्रमिक प्लेब्याक साथ सँगै रचनाहरूको सबै डिस्क को अनुकूल दिनुपर्छ। सबै ठीक सुनिन्छ छ? त्यहाँ स्तर बीचको भिन्नता छ? यसको आफ्नै "वर्ण" सीडी गर्छ? यो चरण मा यो समग्र तस्वीर को दृश्य मा व्यक्तिगत ट्रयाक ध्वनि बीच न्यूनतम फरक हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
प्रतिकृति लागि तयारी गर्दै। हामी कारखाना मा संलग्न छन्।
एनालग ध्वनि विशिष्टता। यो unambiguous कुरा भन्न गाह्रो छ, तर सामान्य एनालग उपकरण थप गैर-रैखिक distortions को स्रोत हो। यस कारण ध्वनि धेरै राम्रो छ। उदाहरणका लागि, एनालग तुल्यकारक च्यानल प्रति सूक्ष्म चरण ढिलाइ परिचय हुन सक्छ। उच्च-सटीक डिजिटल तुल्यकारक यस्तो "अभाव" छ। तर यो यो थप सांगीतिक छ मतलब छैन। कंप्रेशर्स ड्रेसर को मामला मा र अझै पनि गाह्रो। हुनत यो अनुरूप प्रक्रिया को विशिष्टता छ यसलाई थप सुखद समग्र ध्वनि बनाउन, संगीत गहिराई, चमक, बास र न्यानोपन दिन्छ।
ग्राफिकल उपकरण। केही ध्वनि ईन्जिनियरहरु, व्यावसायिक मिश्रण र आफ्नो साँचो कल mastering मानिन्छ, सहायता आवश्यक छैन। तिनीहरूले आवृत्ति र को सुनुवाइ को सङ्कुचन स्तर निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। मात्र mortals, पाठ्यक्रम, सेन्सर को एक किसिम र जो तपाईंले आवाज गरिएका भिजुअल प्रदर्शन परिवर्तनहरू समायोजन गर्न अनुमति दिन्छ समायोजन knobs को स्थिति, अनुगमन गर्न आवश्यक छ। तथापि, यो गतिविधि कान मा - सबै भन्दा राम्रो उपकरण।
mastering र जानकारीको लागि कार्यक्रम
यो विषय मा, धेरै अनलाइन समीक्षा हो। हामी सबै भन्दा राम्रो को दुई, हाम्रो राय मा, कार्यक्रम बारेमा भन्नेछु। को लागि एक स्टीरियो काम गर्न एउटा सुन्दर इन्टरफेस र अवसर छ जो जानकारी उपयुक्त कूल सम्पादन गर्नुहोस् प्रो। Mastering सिफारिस टी-Racks24। सीमक, खुम्च्याउने र EQ: यो धेरै ट्यूब उपकरणहरू emulates। सबैभन्दा सम्मानित विशेषज्ञहरु उनको एनालग ध्वनि को न्यानोपन र कोमलता प्रशंसा गरे।
तिनीहरू यहाँ हो:
Equalizers (ब्यालेन्स गठन)।
Expanders, limiters र कंप्रेशर्स (गतिशील रेकर्डिङ दायरा)। एक विशेष को गतिशीलता काम गर्न फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड गतिशील प्रभाव multiband आवश्यक छ।
स्टेरियो प्रभाव (ध्वनि ठाउँ विस्तार)।
Reverb (रेकर्ड गर्न थप चम्कने भन्छन्)।
हल्ला suppressors (हल्ला फिल्टर)।
सुरीले Exciter (रेकर्डिङ revitalizing मदत)।
Maximizer मात्रा (मात्रा चुचुराहरूको मना गर्दा रेकर्डिङ)।
अब तपाईं के mastering र मिश्रण थाह छ। आशा छ, यो लेख तपाईंलाई उपयोगी हुन बाहिर गरियो। र अन्तमा, सम्झना: यो क्षेत्र मा हाइट्स पुग्न, तपाईं जानकारी ट्रयाक को राम्रो मास्टर प्राविधिक प्रविधी आवश्यकता हो, साथै यसरी एक अद्वितीय ध्वनि सिर्जना खेती र स्वाद र ध्वनि को आफ्नो आफ्नै अर्थमा खेती गर्न।
Baidu - कार्यक्रम कस्तो। Baidu कसरी हटाउने
परिवर्तन को लागि समय: YouTube मा एक च्यानल मेटाउन कसरी वा आफ्नो नाम परिवर्तन गर्न
डिस्क सफा गर्ने कार्यक्रम स्थायी प्रयोगको लागि सबै भन्दा राम्रो उपयुक्त छ?
विन्डोज7को समीक्षा र एक संक्षिप्त विवरण
अनुहार मा उपचर्म pimples को: कारणहरू, उपचार, लागूपदार्थ
"आमाबाबुको प्रेम" - को lightest को विषय मा एक निबंध, जो केवल हुन सक्छ
जीवन र Dostoevsky को काम गर्दछ
विश्व युद्ध आई अज्ञात र रोचक तथ्य